बढ्दो बजारमा फेरि हाइड्रोकै सेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित, किन बढ्दैछ पुनः हाइड्रोकै सेयर मूल्य? – Facebook Khabar
बढ्दो बजारमा फेरि हाइड्रोकै सेयरमा लगानीकर्ता आकर्षित, किन बढ्दैछ पुनः हाइड्रोकै सेयर मूल्य?
काठमाडौं- बढ्दो क्रममा रहेको सेयर बजारमा पुनः हाइड्रोको सेयरमा लगानीकर्ता फर्किएका छन्। बजार सुधार भएसँगै लगानीकर्ताहरू पुनः हाइड्रोपावर कम्पनीमै झुम्मिएका हुन्। यस पटकको बुलमा हाइड्रोपावरको सेयरमा सबैभन्दा धेरै उछाल आएको थियो।
विद्युत नियमन आयोगले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न मिल्ने कानून बनाएसँगै जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा आकर्षण देखिएको हो। बजार सुधार हुने क्रम बढेसँगै हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न सक्ने सम्भावना भएका कम्पनीमा लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ।
जलविद्युत कम्पनीको सेयर तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ। सेयर संख्या कम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरूलाई खेलाउन सबैभन्दा सजिलो हुने गरेको छ। सेयर सप्लाइसँगै हकप्रद सेयरको समाचारले मूल्यमा उछाल आएको हो। यस पटकको बुलमा अझै पनि जलविद्युत कम्पनीको सेयर बढ्न सक्ने देखिन्छ।
गएको साता १६७.९९ अंकको बढोत्तरी देखिएको सेयर बजारमा यो साता कारोबारको पहिलो दिन आइतबार नै ७३.०५ अंकले बढेको छ। २७६५.५१ बिन्दुमा पुगेको सेयर बजार अब ३२०० को बिन्दुमा पुग्ने संकेत देखिएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यसक्रममा पुन हाइड्राेकै सेयरमा लगानीकर्ता झुम्किएका छन्।
आइतबार १ करोड ५० लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब १० करोड रूपैयाँको कारोबार भएको छ। १८३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा धेरै मूल्य बढ्नेमा भने हाइड्रो पावर कम्पनीका सेयरहरु रहेका छन्।
समग्रमा अन्य सूचक भन्दा हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको हो। हाइड्रोतर्फ आइतबार १४८.१८ अंकले सेयर मूल्य बढेको हो। हाइड्रोको सेयर ३१३४ अंक पुगेको छ। विगतमा ५० रुपैयाँ प्रतिकित्तामै सेयर पाइनेगरी घटेको हाइड्रोको सेयर ३२ सय अंकमा पुग्दा सवैभन्दा धेरै कमाउनेमा हाइड्रोकै लगानीकर्ताहरु रहेका थिए। अहिले फेरी पनि हाइड्रोकै सेयर बढ्नेक्रममा रहेको छ।
बजार बढ्ने क्रममा सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरधनीलाई कमाएका छन्। आइतबार नेपाल हाइड्रो डेभलवर्स कम्पनीको १० प्रतिशतले बढेको छ। आइतबार ४०.८० रुपैयाँ प्रतिकित्ता बढेर ४४८.८० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। हिमालयन उर्जा विकास कम्पनीको पनि १० प्रतिशतले सेयर मल्य बढेर प्रतिकित्ता ४६०.९० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
युनियन हाइड्रोपावर कम्पनीको पनि ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेर ३५०.५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। मध्येभोटेकोशीको सेयर मूल्य पनि ९.९७ प्रतिशतले बढेर २५९.१० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य पनि ९.४१ प्रतिशतले बढेर ४३० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ।
आइतबार सवैभन्दा धेरै कारोबार हुनेमा पनि हाइड्रो पावरनै परेको छ। अपी पावर कम्पनीको २९ करोड २२ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। तेस्रो धेरै कारोबार हुनेमा पनि अपर तामाकोशीको परेको छ।
जसको २० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। समग्र हाइड्रो कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। ५४ कम्पनी मध्ये केहीले मात्रै लाभांश घोषणा गरेपनि सेयर मूल्य भने सवैको बढेको छ।
तरलतामा सुधाारको संकेत, निक्षेप संकलन बढ्दा ओरालो लाग्दै सीडी रेसियो